Izinto eziluncedo ekusebenziseni ikhonkrithi kwiipropathi zorhwebo-iBhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba - realtyWW:
EyoMdumba 28, 2020 by Amelie Lawrence, Iimbono zizonke:
Nalu uluhlu lwezizathu eziphambili zokuba kutheni kufuneka usebenzise ikhonkrithi njengeyona nto ithandwayo yokwakha yokwakha izakhiwo zorhwebo kwihlabathi liphela.
Amandla anomdla - Ikhonkrithi idityaniswe nezinto ezintathu eziphambili ezizezi simenti, amanzi kunye nomgangatho owomileyo okanye isanti. Ikhonkrithi eyomeleleyo inawona manqanaba aphezulu okuxinana kwaye ifezekiswa ngokunciphisa umxholo wamanzi kunye nokuhlanganisa kunye nokwandisa inani lesamente. Ezi zixhobo ziba namandla ngakumbi njengoko zisoma. Ngelixa oku kuthatha kuphela iintsuku ezimbalwa ukuya kwiveki nje eyomileyo ngokwaneleyo ukuze kusetyenziswe, umswakama oshiyekileyo ngaphakathi kwekhonkrithi usabela kwaye emva koko ubophe umdibaniso kunye nesamente ukwenza umhlaba ozinzileyo.
Ulondolozo oluncinci luyafuneka -Zokubini kusetyenziswe ikhonkrithi engenziwanga-porous ne porous, kuxhomekeka kwiimfuno zeeprojekthi. Njengoko ikhonkrithi sisixhobo se-porous, ke ngoko unokufakela ukhuseleko kumgangatho wekhonkrithi yakho womphezulu ukwenza ukuba amanzi angahambi. Yonke ikhonkrithi ifuna ulondolozo oluncinci kwaye kufuneka ihlolwe rhoqo ziingcali ezithile. Xa kubonakala ngathi kukho ukuqhekeka, ke kufuneka usebenzise abarhwebi ukutywina ubuhlalu kumphezulu wakho wekhonkrithi.
Inzuzo yokusingqongileyo - Ngokungafaniyo ne-asphalt evimba ukufakwa kwamanzi agudileyo kumhlaba, ikhonkrithi porous iqinisekisa ukugcinwa kwamanzi endalo ngokuvumela amanzi emvula ukuba angene emhlabeni phantsi. Ukubaleka kwamanzi sisaqhwithi yinkxalabo enobuzaza yendalo kwaye oku kuthwala amasuntswana enkunkuma kunye nezinto ezingcolisayo ezivela ezindleleni nakwiindlela kwimithombo yamanzi yendawo. Ikhonkrithi ekhonkrayo ikwanceda ukunciphisa ukhukuliseko kunye nezikhukula kufutshane nezakhiwo zorhwebo. Ngaphandle kolu ncedo luncedo kwindalo esingqongileyo, oku kukhusela umlilo ngokwendalo kwaye kuyakwazi ukumelana neenkanyamba ezinkulu kunye neenkanyamba kwaye kungathinteleki kwiindawo ezinamatye.
Ukubonisa ubushushu Iipropathi zekhonkrithi zibonisa ngokucacileyo kunokufunxa ubushushu. Olu phawu lubonakalayo linciphisa ubushushu besixeko esitshisayo. Ubushushu bamanzi obuphakanyisiweyo ngamanye amaxesha buba yingozi kwizilwanyana zasendle & bukhuthaze ukukhula okungafunekiyo kweebacteria. Ikhonkrithi ikhuselekile kwaye ibonakalisa ubushushu kwizinto ezibonakalayo ezisehlisa iindleko zizonke zokupholisa ngexesha lasehlotyeni kwaye igcina iqondo lobushushu kwinqanaba elinokulawuleka.
U ku lungiswa - I Ukusetyenziswa kweekhonkrithi ezininzi kubandakanya iindlela zokuhamba, iindlela, iidrayivu, iipatiyo, iigaraji, amanyathelo kunye nezakhiwo ziphela. Ukutshintshwa ngokubanzi kwikhonkrithi njengesixhobo ngokuqinisekileyo kuyinto yexabiso elifanelekileyo kuye nawuphi na umnini weshishini kunye nabanini bepropathi abanqwenela ukwakha izakhiwo ezihlala zixabisa amaxabiso okwakha.
Njani ukuba inkampani yokulungisa ikhonkrithi ingaluncedo olukhulu?
Nokuba luluhlu olude lwezinto ezinokusingqongileyo kunye nezoqoqosho, ikhonkrithi ngokuqinisekileyo iya kufuna ulungiso lwexeshana ngalo lonke ixesha lokuphila kwayo. Ukuqinisekisa ukuba ulwakhiwo lugcina uhlengahlengiso lwayo olufanelekileyo, unokunxibelelana neekhonsathi zobungcali kwaye zinokugcina okanye zilungise okufanayo kwiiyure ezimbalwa. Ke ungasebenzisa izixhobo zekhonkrithi kwipropathi yakho yorhwebo kwaye unokukhusela umphezulu wakho wekhonkrithi ngokubopha kwe-epoxy.
Ngaphandle kwalonto, ungonyusa ukuqina kwezixhobo zekhonkrithi ngokusebenzisa abaxhamli kwaye ungayenza ukuba ichasene neekhemikhali. Lilonke, oku kunokugqitywa kwelokuba ikhonkrithi yeyona nto ilunge kakhulu yokwakha iipropathi zorhwebo.
Amelie Lawrence Februwari 28, 2020
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya, Yard kunye neGadi noqhotyosho Ukhonkco, Indlela yokukhonkrisha ikhonkrithi. Bookmark le Permalink.
Agasti 23, 2016 Izibonelelo ezi-6 Zokukhathalela Ofanele Ukwazi Uya kuchitha ixesha lakho elininzi ngaphakathi kwaye ke ukukhetha ezona zixhobo zilungileyo zomgangatho kubalulekile. Kubalulekile ukusebenzisa iimveliso ezinekhemikhali ezilungele impilo yakho kwaye azinabungozi. Ukuze wenze umgangatho osemagqabini ngaphakathi, ukukhetha owona mgangatho ubalaseleyo ngokuqinisekileyo iya kuba lukhetho lobulumko. Oku kungawugcina umoya ucocekile kwaye kungenazintsholongwane. Ukuxakaniseka kuxhaphake kakhulu emizini ngenxa yokulula kunye nentuthuzelo abanikezela ngayo. Nokuba kutheni […] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu
Novemba 20, 2018 Ezona zixhobo ziNzima zokuPhucula iYadi yakho yokuThengisa Xa sisenza into enkulu, sifuna ukuqiniseka ukuba sinokufumana okona kulungileyo sinokukufumana. Ukuhlaziywa kwamasango ayisiyonto eyodwa, ngakumbi xa ufuna ukuba kwenziwe umsebenzi ukuze ukwazi ukuthengisa kunye nokuthengisa ipropathi yakho. Ukuthathela ingqalelo ukuba uzenzile zonke izinto eziyimfuneko- njengokuthetha nabamelwane kunye nokwazi ukuba ufuna ukutshintsha njani indawo yakho, nolu uluhlu lwezixhobo ezinobunzima bokuphucula indawo yakho esemva, ilungele ukuthengisa. Abembi bemiganyana Mini ziintsuku apho […] exhonyiweyo Yard kunye neGadi
Aprili 25, 2019 IziBonelelo ezi-6 ze-Epoxy Floor Coating Umgangatho we-epoxy coating uhlala usetyenziselwa indawo yokuhlala, ezorhwebo kunye nezomgangatho ukwenza indawo egudileyo, yomelele kwaye inomgangatho ophezulu wokusebenza. Ifakwa ngaphezulu komgangatho wekhonkrithi ukuyenza ukuba ibe namandla ngakumbi kwaye ingamelana neekhemikhali, amabala kunye nokunxiba kwemihla ngemihla kunye nokukrazula. Iindawo ezininzi zokuhlala zixhomekeka ekuxhaseni i-epoxy ukugcina indawo ekhuselekileyo nenecocekileyo yosapho, ifenitshala kunye nokuhamba kweenyawo. Ukufaka isicelo se-epoxy ngaphezulu komphezulu wekhonkrithi kudala ukugqitywa okunzima, okuhlala kunye nokugqwala okuphezulu. Ngaphandle […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Disemba 7, 2018 Izinto omele uyazi malunga nophahla Ukuopha indawo yenye yeendlela eziphambili zotyalo-mali zobomi bakho bonke. Kububulumko ukuqinisekisa yonke into ukusuka kuhlolo lwangaphambili ukuya kulungiso nolungiso lwamva. Akufuneki ungxame kwimicimbi enxulumene nophahla. Endaweni yoko thatha ixesha elaneleyo lokujonga kuzo zonke iinkcukacha ezincinci zenkqubo yophahla. Ngale ndlela, unokuqinisekisa ukuba yonke into iwela kwindawo efanelekileyo. Nazi izinto ezimbalwa ezidwelisiweyo phantsi ekufuneka wazi malunga nophahla. Uhlobo kunye nesitayile kufuneka kuhambisane […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Oktobha 25, 2017 Inzuzo kunye nokuHanjiswa kweKhonkrithi kwiTafile yephahla Umvelisi weethayile zekhonkrithi usebenzisa isanti emsulwa, umgangatho wesamente, kunye namanzi ekuveliseni imveliso yokugqibela. Kukho uyilo kunye nemibala yeethayile zekhonkrithi ongazibona emarikeni. Ubume beethayile zekhonkrithi zinokuba nazo okanye zingalingani. Uhlobo olunye inokuba ngumxube wemibala emininzi ngaphandle kokuphola. Kukho izibonelelo kunye neengozi zokusebenzisa isixhobo ngoko ke masijonge iinkcukacha zokwenza isigqibo esingcono malunga nokuthenga imveliso. Izibonelelo ze […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya